ဥရောပ၌ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ယူအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာကျွန်တော်အမြဲသင်တို့အဘို့တန်ဖိုးနည်းရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေနေကြသည်. ကျနော်တို့ကောင်းတဲ့တူသောအကြောင်းအရာများစူးစမ်းကြပါပြီ ဟိုတယ်များ နှင့် လှပသောရထားခရီး. ဒါပေမယ့်မီးရထားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေတ်အစားဆုံးခေါင်းစဉ်အတွက်ဖြစ်ပါသည် ပတ်ဝန်းကျင်. The Coradia Ilint is the world’s first low-riding train. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဖြစ်နိုင် ကမ္ဘာပေါ်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရဆုံးသောရထားဖြစ်သည်.
အဆိုပါ Coradia Ilint တစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်-based နိမ့်စီးနင်းရထားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဂျာမနီနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား journeys. အသစ်ရထားမကြာသေးမီက 4-ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြေးပြီးစီး. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း, ရထားမှာသွား၏ 80 တစ်နာရီကို KM. စမ်းသပ်မှုများလည်းရထားများအတွက်အားလပ်ချိန်အကဲဖြတ်. အခြားရှုထောင့်နေဆဲဖြစ်သည် စမ်းသပ်ပြီးခံရ ချောမွေ့တဲ့မီးရထားခရီးသေချာစေရန်.
ရထားအသစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးလောင်စာဆဲလ်ရထားဖြစ်သည်. ဒါဟာအစဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲဘို့လျှပ်စစ်ပါဝါကိုအသုံးပြုသည်. ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ထားသောရေနှင့်ရေငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်မှသာထုတ်လွှတ်မှုသုညကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်. ရထားအသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ Coradia Ilint နိမ့်စီးနင်းရထားအောက်ပါထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါတယ်;
တိုယိုတာ ယင်းချဉ်းကပ်မှုသာရထားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နဲ့တူလည်းမိမိတို့၏ကားများကိုဤဟိုက်ဒရိုဂျင်ချဉ်းကပ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပုံ. အဆိုပါမီးရထားထဲတွင်ဗြိတိန်တွင်စတင်ရန်စီစဉ်ထားသည် 2021. Coradia Ilint နိမ့်ကျသောရထားသည်ဂျာမနီအပြင်အစတွင်အောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ခဲ့သည် 2018. ရထားလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည် Salzgitter လမ်းကြောင်းများရှိလက်ရှိဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆီဖြည့်ရန်စခန်းလိုအပ်သည်.
Maksim Tsurkov ကမျှဝေသည် (@m_tsurkov)
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fworlds-first-low-riding-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)